Shacabka Muqdisho oo soo dhaweeyay dib u furidda waddooyinkii xirnaa | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Shacabka Muqdisho oo soo dhaweeyay dib u furidda waddooyinkii xirnaa
Shacabka Muqdisho oo soo dhaweeyay dib u furidda waddooyinkii xirnaa
Muqdisho (SNTV) Shacabka Muqdisho ayaa si caadi ah u isticmaalaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo xirnaa maalmihii u dambeeyey, kadib markii kulanka Guddiga Amniga Qaranka laamaha amniga lagu faray in ay furaan waddooyinka muhiimka ah si shacabku ay u isticmaalaan.
Isgoysayada furan ee shacabku ay isticmaalayaan waxaa kamid ah kuwa dhexmara waddada Wadnaha tan Makka Al-mukaramah iyo kuwa kale oo badan oo xiligaan ay si caadi ah u isticmaalayaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho.
Arrintaan ayaa durbadiiba waxaa soo dhaweeyay shacabka magaalada Muqdisho oo Dowladda ku ammaanay sida ay ula socoto rabitaanka shacabka oo maalmihii dambe dalbanayey in la furo qaar kamid ah waddooyinka magaalada, iyadoo qaar kamid ah shacabka oo lahadlay Warbaahinta Qaranka ay ku tilmaameen arrintan mid muujineysa iska warqabka Dowladda iyo Shacabka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan isugu yeeray guddiga Amniga Qaranka, si looga jawaabo cabashooyin ka yimid shacabka caasimadda, taasi oo keentay in Guddiga Amniga Qaranka ay go’aamiyeen in muddo 48 saacadood ah lagu furo waddooyinkii xirnaa sida Soddonka, Makka Al-mukarramma, Afisyooni iyo kuwa kale ee la midka ah, ciidammada amniguna ay gutaan waajibaadka ka saaran ilaalinta iyo xasllinta nabadgelyada caasimadda.
Previous articleTaliyaha Booliska iyo Michel keating oo gaaray Gaalkacyo
Next articleDood-wadaag ku saabsan Dastuurka oo Muqdisho lagu qabtay